Naannoo Tigraay Ilaalchisee Dhugaa Jiru Hawaasi Addunyaa Hin Hubanne: Waajjira Muummicha Ministeera Itiyoopiyaa
Waxabajjii 04, 2021
Hawaasi Addunyaa haala naannoo Tigraay gama ilaaleen dugaa ifa gala ta’e hedduu arguu hin dandeenye jechuu dhaan waajjirri muummicha ministeeraa beeksisee jira. Itti gaafatamtuun kutaa presii waajjirichaa Bilenee Siyyuum qaamotii hanga tokkoon kan argamuu fi adeemsi dhugaa jiru irra daruu bu’aa gaarii hin qabaatu jedhan
Waajjirri muummicha ministeeraa Abiy Ahimed kaleessa ibsi inni kenne, haala naannoo Tigraay keessaa gama ilaaleen ta’e jedhamee kan hafe, irra kan darbamee fi gabaasaalee wal dha’an ittiin jedhe kan itti ibse ture.
Ibsa sana kan kennan itti gaafatamtuun kutaa presii waajjira muummicha ministeeraa Billene Siyyuum, qabxiilee hawaasi addunyaa dagate jedhan tuqaniiru.
Dhugaawwan jiran ta’e jedhamee kan irraanfataman beekaa kan irra darbamanii fi irraanfataman, qaamotii ajandaa ka biro qabaniin jechuu dhaan ibsaniiru. Itiyoopiyaan duula ba’iin isaa badii ta’etu irratti geggeessamaa jira jedhan. Adeemsi akkasiis bu’aa gaarii hin argamsiisu jedhan.
Hiriirri Dhiittaa Mirga Namoomaa Gondar Keessatti Hordoftoota Amantii Islaamaarratti Geggeessame Balaaleffate Diisitti Geggeessame
Dubartoota Gudeeduu fi Namoota Seeraan Ala Dabarsanii Gurguruutu Jira: Baqattoota mooraa Yaman Keessaa
ABOn Gabaasaan Koomishinni Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa Waa’ee Hooggansa Isaa Hidhaa Jiranii Baase Jalqabbii Gaariidha, Jedhe